ZayYarHlaing: Peace with me,Wanna Play Guitar 1&2( How I Took It )
Peace with me,Wanna Play Guitar 1&2( How I Took It )
Wanna Play Guitar 1
Wanna Play Guitar 2
ဒီ image ၃ ခုကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာသိပြီးသားဖြစ်ကြမယ်ယူဆပြီး
How I Took It ကိုမရေးပဲထားခဲ့တာပါ။
အခုတော့ ... မေးတဲ့သူတွေကတော်တော်လေးရှိလာလို့ တစ်ယောက်ခြင်းကိုပြန်ဖြေအေရမဲ့အစား၊
post လေးပဲရေးလိုက်ပါအုံးမယ်လို့ တွေးမိပြီးရေးလိုက်ပါပြီ။
အရင်ကကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့Night Painting Album ထဲက
တစ်ခြား image တွေလိုပါပဲ။
step 1 ... ထုံးစမ်အတိုင်း camera ကို tripod နဲ့ ထောင်ပြီး setting လုပ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တဲ့ setting ကတော့ ...
M Mode မှာ Shutter speed က 30s ၊ Aperture က f/22 ၊ ISO က 400 ပါ။
step2... Guitar ကိုပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း 45 ဒီဂရီခပ်စောင်းစောင်းလေး ကုလားထိုင်မှာမှီပြီးတင်လိုက်ပါတယ်။
step3... ပြီးတော့ Guitar ကို focus ဖမ်းပါတယ်။ လိုခြင်တဲ့ focus ရတော့ camera က lens မှာ
focus ကို A Mode ကနေ M Mode သို့ ပြောင်းပြီး focus lock ချလိုက်ပါတယ်။
camera setting မှာ timer mode ပေးပါတယ်။
step4... အခန်းမီးကိုပိတ်၊ လက်ထဲမှာ LED အဖြူရောင်ဓါတ်မီးကို ready ကိုင်ထားပါတယ်။
shutter release button ကို press လိုက်ပြီး camera shatter စပွင့်တဲ့အချိန်ကို camera နောက်ကနေစောင့်ပါတယ်။
step5... shatter စပွင့်ပြီး5sec လောက်ရောက်တော့ Guitar နားကိုသွားပြီး Guitar ရဲ့body ပေါ်မှာ LED ဓါတ်မီးကိုပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်လုပ်ပြီးဟိုဟိုဒီဒီ လိုက်ပြီးဖြေးဖြေးခြင်းအလင်းရောင်ပေးပါတယ်။
( ကျွန်တော့်ရဲ့ အတွေ့ အကြုံအရ ဖြေးဖြေးခြင်းအလင်းရောင်လိုက်ပေးတာနဲ့ ၊ ခပ်မြန်မြန်လေးအလင်းရောင်လိုက်ပေးတာဟာ ရလာတဲ့ result ကမတူပါဘူး။ နှစ်မျိုးစလုံးကတော့ကောင်းပါတယ်။ တစ်မျိုးစီ art ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ )
step6... Guitar body ပေါ်မှာဓါတ်မီးကိုကစားပြီးတဲ့အခါ၊ ဓါတ်မီးမလင်းရောင်ကိုလုံးဝပိတ်လိုက်ပါတယ်။
Peace Logo လေးဆွဲမဲ့နေရာမှာဓါတ်မီးကို ready ထားပြီးမှ၊ ဓါတ်မီးကိုပြန်ဖွင်းပြီးစက်ဝိုင်းကိုအရင်စပြီးဆွဲပါတယ်။
စက်ဝိုင်းပြီးတော့ဓါတ်မီးကိုပိတ်၊ အလယ်ကအချောင်း ၃ ခုကိုလဲတစ်ချောင်းဆွဲ၊ မီးပိတ်၊ ပြန်ဖွင့်နောက်တစ်ချောင်းဆွဲ၊
Guitar body ပြီးတော့ Logo ဆီသွားတဲ့အခါဓါတ်မီးကိုမပိတ်ခဲ့ပဲဒီအတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်အလင်းတန်းကြီးပါလာမှာပါ။
Guitar နဲ့Logo ဟာအခုလိုသပ်သပ်ကြီးဖြစ်မနေပါဘူး။
ဒီလိုပဲ Logo ဆွဲတဲ့အခါလဲမီးကိုပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်လုပ်ပြီးမဆွဲရင် Logo ဟာအားလုံးတစ်ဆက်ထဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
စက်ဝိုင်းနဲ့ အချောင်းလေးတွေသပ်သပ်စီရနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီးမီးကိုပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်လုပ်ပြီးတော့ဆွဲခဲ့ပါတယ်။
step7... ကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ shutter speed က 30s ဆိုတော့ဒီလုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကို shutter စပွင့်ပြီး5sec ကနေ 25 sec အတွင်းပြီးအောင်လုပ်ပါတယ်။ 25 sec ရောက်တော့၊ camera နောက်ကိုပြန်ပြေးပြီး ကျန်တဲ့5sec ကိုစောင့်နေလိုက်ပါတယ်။
မြင်ရတဲ့ပုံအတိုင်းရတယ်ဗျာ။ ဘာဆိုဘာနဲ့ မှလဲမပြင်ထားဘူး။ ဘာအမျိုးအစား
ဒီ image ၂ ခုကလဲဒီလိုပါပဲ။
Peace with me လုပ်ဆောင်မှုအတိုင်းအားလုံးအတူပါပဲခင်ဗျာ။
Peace Logo လေးကိုမဆွဲခဲ့တာလေးတစ်ခုပါပဲ။
ကျန်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုအဆင့်ဆင့်နဲ့camera setting တွေကအားလုံးအတူတူပါပဲ။
Wanna Play Guitar2မှာကတော့ဂီတာကြိုးညှိတဲ့ key လေးတွေကို
Key လေးတွေနားကိုအနီးကပ် ( ထိလုနီးပါး ) ပြီးဓါတ်မီးအလင်းရောင်ကိုခပ်ကြာကြာလေးပေးခဲ့တာပါ။
Guitar body ကလဲအစထဲကတောက်နေတဲ့အပြာရောင်ကြွေသားဖြစ်လို့ ကျွန်တော် Lighting ကစားရတာအရမ်းကောင်းသွားတာပါ။
Wanna Play Guitar 1 နဲ့2 မှာ Guitar ရဲ့အရောင်တောက်မှု၊ အလင်းများမှု၊ အလင်းနဲမှု၊ စတဲ့ result တွေကမတူပါဘူး။
ကပ်ပြီးပေးတာ၊ ခွာပြီးပေးတာ၊ ပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်လုပ်တဲ့ အချိန်မတူညီတာ၊
စတဲ့ Lighting ကစားမှုသက်သက်ပါ။ ဒါကိုသိစေခြင်လို့ ဒီ image ၂ ခုကို 1 &2ဆိုပြီးချပြလိုက်တာပါ။
အဲ့ဒီညက Guitar နဲ့Lighting ကိုကစားပြီးကျွန်တော်ရှုခဲ့တာ ပုံပေါင်းမနဲပါဘူး။
အားလုံးချပြရင် MLM site ကြီးလေးသွားမှာဆိုးလို စုစုပေါင်းစီ ၃ ပုံကိုပဲချပြလိုက်တာပါ။
Lighting တွေကစားတာမတူတဲ့အတွက်၊ အလားတူကျွန်တော့်ရဲ့ ကျန်သေးတဲ့ Guitar image တွေဟာတစ်ပုံခြင်းကို မတူညီတဲ့ result တွေနဲ့ ပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ Light Painting ကိုလုပ်ရင်းလုပ်ရင်းကပျော်လာပါပြီ။
သယ်ရင်းတို့ အားလုံးလဲ စမ်းကြည့်ကြရင်းပျော်ရွှင်မှု၊ ကျေနပ်ပီတိဖြစ်မှုလေးတွေကိုခံစားနိုင်ကြပါစေဗျာ။
0 comments: to “ Peace with me,Wanna Play Guitar 1&2( How I Took It ) ”